၁၈၃၆-ခုတွင် မော်လမြိုင်အစိုးရကျောင်းကို ပိတ်လိုက်ရသောအခါ ကျောင်းအုပ်ကြီး စီဖာဘဲနက် (Cephas Benett) အလုပ်မှ နှုတ်ထွက်သွားသည်။ မကြာမီမှာပင် ဘဲနက်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးသတင်းစာဖြစ်သော မော်လမြိုင်ကရော်နီကယ် (Maulmain Chroniale) သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာဖြစ်လာသည်။
၁၈၄ဝ ပြည့်နှစ်တွင် မစ္စတာဘဲနက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ပြန်သည်။ စက်ဆရာဂျွန်အိပ်၊ ဂျွန်စလာနှင့် အဗောင်တို့ လိုက်ပါသွားကြသည်။ ထိုသုံးဦးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် မြန်မာနှင့် ကရင်ခဲစာလုံးများကို အရွယ်အစားချုံ့၍ သေးငယ်သော အရွယ်အစားအဖြစ် သွန်းလုပ်ကြသည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ မော်လမြိုင်ရှိ အမေရိကန်သာသနာပြုပုံနှိပ်တိုက် (American Baptist Mission Press) တွင် ခဲစာလုံးအငယ်စားများကို အသုံးပြုလာနိုင်သည်။ အဗောင်သည် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ရောက်သောအခါ သာသနာပြုပုံနှိပ်တိုက်မှာပင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။
နောင်အခါ အဗောင်သည် “ဦးကူး“ ဟု အမည်ပြောင်း၍ သစ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သည်။ အသိုင်းအဝိုင်းကောင်း၍ လုံ့လဝီရိယရှိသော ဦးကူးသည် ချမ်းသာကြွယ်ဝသော သစ်ကုန်သည်ကြီးဖြစ်လာသည်။
ဦးကူးသည် “ဦးအောင်မှူး“ ၏ ပထမဇနီးမှ ဖွားမြင်သော “ေါ်လုံမ“ နှင့် အကြောင်းပါရာ သားသမီး (၁၃) ဦးထွန်းကားသည်။
ပထမသမီးဖြစ်သူ မငြိမ်းသည် နို့စို့အရွယ်တွင် ကွယ်လွန်သည်။
ဒုတိယကလေးသည် မီးတွင်းမှာပင် သေဆုံးသွားသည်။ တတိယသမီးမှာ “မရွှေလုံး“ ဖြစ်သည်။ စတုတ္ထသားမှာ Kao Taik Ah Leong ဖြစ်၍ “မစိမ်းမြ“ နှင့် လက်ထပ်သည်။ ပဉ္စမသားမှာ Lao Taik Ah Kong ဖြစ်၍ “မမိုးကြင်“ နှင့် ထိမ်းမြားသည်။ ဆဋ္ဌမသားမှာ Lao Taik Ah Kane ဖြစ်သည်။ သတ္တမသားမှာ Lao Taik Ah Syoung ဖြစ်၍ “မလေးမေ“ နှင့် “မမြကလေး“ ဇနီးနှစ်ဦးရ်ှိသည်။ အဋ္ဌမမသားမှာ Lao Taik Ah Syoo ဖြစ်၍ “မမျှား“ နှင့် အိမ်ထောင်ကျသည်။ နဝမသားမှာ Lao Taik Ah Sou ဖြစ်၍ နံပါတ် (၁) ဇနီး “မဖွားရီ“ နှင့် ဒုတိယဇနီး “မမြသွေး“ တို့ရှိကြသည်။ ဒသမသား Lao Taik Ah Poh သည် “မသိန်းချုံ“ နှင့် အိမ်ထောင်ပြုသည်။ ဧကာဒသမသမီးမှာ “မငယ်“ ဖြစ်သည်။ ဒွါဒသမသားဖြစ်သူ Lao Taik Ah Pan သည် “မချုံ“ နှင့် အကြောင်းပါသည်။ တေရသမသားဖြစ်သူ Dr.Lao Taik Ah Pon သည် သားအထွေးဆုံးဖြစ်သည်။ ဇနီးကား “မမီဟ ဖြစ်သည်။ ဦးကူးနှင့် ဒေါ်လုံမ တို့၏ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တို့သည် နှစ်ခြင်းခရစ်ယန်သာသနာအတွက် သာမက ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စများမှာပါ ရက်ရက်ရောရော လှူဒါန်းသွားကြသည်။
အစိုးရကျောင်း၏ အကြောင်းကို ပြန်ဆက်ရသော် ၁၈၃၆-ခုတွင် ပိတ်လိုက်ရသော အစိုးရကျောင်းကို ဧပြီ ၁၉၃၇ တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သည်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးမှာ ဂျော့ဟင်နရီဟောက် (George Henry Hough) ဖြစ်သည်။ “ဆရာဟောက်“ သည် ၁၈၁၆-ခုတွင် နှစ်ခြင်းခရစ်ယန်သာသနာပြုအဖွဲ့နှင့်အတူ ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာပြီး ရန်ကုန်မှ တစ်ဆင့် မော်လမြိုင်သို့ ပြောင်းရွှေ့လာသူဖြစ်သည်။ ဆရာဟောက်၏ ခန္ဓာကိုယ်မှာ သေးသွယ်ပြီး မျက်စိအစုံမှာ ကြည်လင်တောက်ပသည်။ မုတ်ဆိတ်မှ တစ်ပါးမျက်နှာပြင်ရှိ အမွှေးများကို နေ့စဉ် ပြောင်လက်နေအောင်ရိတ်သည်။ အမြဲလိုလိုမိမိမုတ်ဆိတ်ကို ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်နေလေ့ရှိသည်။ ဆရာဟောက်သည် ဆရာတစ်ယောက်တွင်ရှိသင့်ရှိအပ်သော အရည်အချင်းပြည့်ဝသူဖြစ်သည်။ ၁၈၄၅-ခုတွင် ရောက်သောအခါ မော်လမြိုင်အစိုးရကျောင်း၏ ကျောင်းအုပ်ကြီးတာဝန်ကိုသာမက တနင်္သာရီတိုင်းပညာဝန်ရာထူးကိုပါ ပူးတွဲထမ်းဆောင်ရသည်။
၁၈၇၆-ခုတွင် အစိုးရကျောင်းကို မြို့မတံတားလမ်းမှ သိပ္ပံကျောင်းလမ်း (Freemason Street) ထိပ်သို့ ပြောင်းရွှေ့သည်။ ထိုစဉ်က ကျောင်းအုပ်ကြီးမှ “အဒမ်“ (C.A.G.E Adam) ဖြစ်သည်။
အောက်မြန်မာနိုင်ငံကို ဗြိတိသျှတို့ သိမ်းပိုက်ပြီး (၁ဝ) နှစ်ကျော်သည်အထိ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထိထိရောက်ရောက်တာဝန်ယူမှုမရှိချေ။ ၁၈၆၇-ခုရောက်မှသာ ပညာရေးဌာနကို စတင်ဖွင့်လှစ်သည်။ ပညာရေးဌာနစတင်ဖွင့်လှစ်စဉ်က ပညာမင်းကြီးတစ်ဦးနှင့် စာရေးတစ်ဦးသာရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗြိတိသျှတို့ စတင်ကျင့်သော စနစ်မှာ ၁၈၃၅-ခုတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ မက္ကောလေး (Macaulay) တင်သွင်းသည့် ပညာရေးအစီရင်ခံစာအပေါ်၌ အခြေခံသည်။ မက္ကောလေး၏ အခြေခ့မူသုံးချက်တို့မှာ-
၁။ အရှေ့တိုင်းပညာရပ်နှင့် စာပေကို အားပေးချီးမြှင့်မည့်အစား၊ အနောက်တိုင်းပညာရပ်နှင့် အင်္ဂလိပ်စာပေကို အားပေးချီးမြှင့်ရန်၊
၂။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစာပေကို သင်ကြားရေး မဏ္ဍိုင်အဖြစ်အသုံးပြုရန်နှင့်
၃။ အသားအရောင်ညိုသော်လည်း၊ အင်္ဂလိပ်စာစကားတတ်ကျွမ်း၍ အင်္ဂလိပ်တို့ကဲ့သို့ တွေးခေါ်ကာ အင်္ဂလိပ်စိတ်ပေါက်သော လူတန်းစားတစ်ရပ်ကို မွေးထုတ်၍ ထိုလူတန်းစားကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့် အုပ်စိုးသူ (အင်္ဂလိပ်) တို့အကြားတွင် ပေါင်းကူးတံတားသဖွယ်ဆောင်ရွက်စေရန်တို့ဖြစ်ကြသည်။
ဗြိတိသျှအာဏာပိုင်တို့သည် ပညာရေးစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဆရာမလုံလောက်မှုပြဿနာနှင့် ကြုံတွေ့ရသည်။ ထိုကြောင့် ၁၈၇၈-ခုတွင် ဆရာမလုံလောက်သဖြင့် မော်လမြိုင်နှင့် စစ်တွေရှိအစိုးရအထက်တန်းကျောင်းများကို အလယ်တန်းကျောင်းအဆင့ိသို့ နှိမ့်ချခဲ့ရသည်။ ဤအချက်ကို အထောက်အထားပြု၍ မူလတန်းကျောင်းအဆင့်မှ အစပျိုးခဲ့သော မော်လမြိုင်အစိုးရကျောင်းသည် အလယ်တန်းကျောင်းအဆင့်သို့လည်းကောင်း ၁၈၇၈-ခုမတိုင်မီမှာပင် အထက်တန်းကျောင်းအဆင့်သို့လည်းကောင်း တိုးတက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
ရန်ကုန်အစိုးရကျောင်းကို (၁၈၇၂-၇၃) ပညာသင်နှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်သည်။ ထိုကြောင့် ၁၈၃၅-ခုတွင် စတင်တည်ထောင်သော မော်လမြိုင်အစိုးရကျောင်းက ရန်ကုန်အစိုးရကျောင်းထက် (၃၇) နှစ်ဝါကြီးသည်။ ၁၈၇၆-ခုတွင် ရန်ကုန်အစိုးရကျောင်း၌ အထက်တန်းများကို စတင်ဖွင့်လှစ်သည်။ ထိုနှစ်တွင် အထက်တန်းကျောင်းသား (၁၅) ဦးရှိသည့်အနက် (၇) ဦးမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြ၍ (၇) ဦးမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပြီး (၁) ဦးမှာ မွတ်စတင်ဖြစ်သည်။
၁၈၈၅-၈၆ ခု ပညာသင်နှစ်တွင် အစိုးရအလယ်တန်းကျောင်းဟူ၍ ပုသိမ်၊ ရွှေကျင်၊ ထားဝယ်၊ မြိတ်၊ ကျောက်ဖြူ၊ သံတွဲနှင့် ပြည်မြို့တို့၌ ကျောင်းပေါင်း (၇) ကျောင်းရှိသည်။ အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းဟူ၍ မော်လမြိုင်၊ စစ်တွေနှင့် ရန်ကုန်မြို့တို့တွင် (၃) ကျောင်းသာရှိသည်။ ဤအချက်ကို အထောက်အထားပြု၍ ၁၈၇၈-ခုက ဆရာမလုံလောက်မှုကြောင့် အလယ်တန်းအဆင့်သို့ လျှောကျခဲ့သော မော်လမြိုင်အစိုးရကျောင်းသည် ၁၈၈၅-ခုတွင် အထက်တန်းကျောင်းအဆင့်သို့ ပြန်လည်တိုးတက်လာသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
မော်လမြိုင်အစိုးရကျောင်းကို စတင်တည်ထောင်သည့် ၁၈၃၅-ခုမှ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မော်လမြိုင်သို့ ကူးစက်လာသည် ၁၉၄၂-ခုအထိ ကျောင်းအုပ်ကြီး (၁၇) ဦးရှိသည်။
၁။ မစ္စတာဘဲနက် (Cephas Bennet) ၁၈၃၄-၃၆
၂။ ဆရာဟောက် (George Henry Hough) ဧပြီ ၁၈၃၆-ခု
၃။ အဒမ် (C.A.G.E. Adams) ၁၈၇၆-ခု
၄။ ဝီလ်ကင်(H.E. Wilkins)
၅။ မစ္စတာနေပီယန် (Mr.Napean)
၆။ မစ္စတာ ဝှိုက် (O.White)
၇။ မစ္စတာ ဝေး (Mr. Wales)
၈။ မစ္စတာ မာရေး (Mr.Murray) B.A, I.E.S
၉။ ကွင်လင် (P.B. Quinlan) B.A, I.E.S
၁ဝ။ မစ္စတာ မန်ရို (Mr.Munro) M.A, I.E.S ၁၉၂၂-ခု
၁၁။ ဘတ်ထရက် (E.W. Buttress) B.A, B.E.S ၁၉၂၂-၃ ခု
၁၂။ ဖင်လေဆန် (J.A. Finlayson) B.A, B.E.S ၁၉၂၃-၄ ခု
၁၃။ ဝဒ်ဒါစပွန်း (W.G.F Wadolerspoon) M.A ၁၉၂၄-၈ ခု
၁၄။ အီဗါ (W.H. Eva) B.Sc. I.E.S ၁၉၂၈-၃၁ ခု
၁၅။ ဘတ်ထရက် (E.W.Buttress) B.A, B.E.S ၁၉၃၁-၃၃ ခု
၁၆။ ဦးဘဘွား ( U Ba Bwa) M.Ed, B.E.S ၁၉၃၃-၃၄ ခု
၁၇။ မစ္စတာတော့ (J.Todd) B.Sc, B.E.S (2) ၁၉၃၄-၄၂ ခု
ယခုလက်ရှိ တီ (T) ပုံသဏ္ဍာန် နှစ်ထပ်အုတ်ကျောင်းကို ပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဘရင် (M.B, Ch.B) က ၁၉ နိုဝင်ဘာ ၁၉၂၇ တွင် အုတ်မြစ်ချပေးပြီး ဆက်လက်တည်ဆောက်ခဲ့ရာ ၁၉၂၈-ခုတွင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသည်။
ဒေါက်တာဘရင်ကို ၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၈၄ တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဖွားမြင်သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူမှာ မွန်မင်းမျိုးမင်းနွယ်အဆက်ဖြစ်သည်။ ၁ဝ မေ ၁၉ဝ၆ တွင် ဝိုင်အမ်ဘီအေ (Y.M.B.A= Young Men’s Buddhist Association) ကို ဦးဘဘေ၊ ဦးမောင်ကြီးနှင့် ဒေါက်တာဘရင်တို့ သုံးဦးက ဦးဆောင်တည်ထောင်သည်။ ဒေါက်တာဘရင်သည် ရန်ကုန်ရှိ A.B.M ကျောင်း၊ Baptist College၊ ရန်ကုန်ကောလိပ်၊ ဆေးကောလိပ်၊ ကာလကတ္တားတက္ကသိုလ်နှင့် အီဒင်ဘတ်တက္ကသိုလ်တို့တွင် ပညာသင်ယူခဲ့သည်။ M.B, Ch.B, T.D.M, L.M ဘွဲ့များရရှိခဲ့သည်။
၈ ဇန်နဝါရီ ၁၉၂၄ မှ ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၂၄ အထိ ရန်ကုန်မြူနီစီပါယ် ကော်ပိုရေးရှင်းတွင် တိုင်းရင်းသားများထဲမှ ပထမဆုံးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာသည်။ ၁၉၂၇-ခုတွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာသည်။
မော်လမြိုင်အစိုးရကျောင်း (ယခုအထက-၁) ၏ သက်တမ်းသည် ၂ဝ၁၇-ခုတွင် (၁၈၂) နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။
ယခင်ဆောင်းပါးယခုပညာသင်နှစ်မှစ၍ လေးတန်းနှင့် ရှစ်တန်း အစိုးရစစ်စာမေးပွဲကို မိမိကျောင်း၌သာ ဖြေဆိုရမည်